युवा वैज्ञानिक डा. अधिकारीलाई बचाऔँ | चितवन पोष्ट दैनिक
युवा वैज्ञानिक डा. अधिकारीलाई बचाऔँ
विसं २०६७ सालमा नेपाल सरकारबाट युवा वैज्ञानिकको सम्मान प्राप्त गरेका डा. प्रकाश अधिकारी विगत साढे तीन वर्षदेखि सडक दुर्घटनामा परेर मस्तिष्कमा गम्भीर चोट लागेपछि घरको ओछ्यानमा अचेत अवस्थामा छन् । भरतपुर उपमहानगरपालिका वडा नं २४ शिवनगर निवासी डा. अधिकारीले एमबीबीएस र एमडी पनि गरेका छन् । पूर्वाञ्चलको लहानमा सञ्चालित स्वास्थ्य शिविरमा सहभागी भएर फर्कने क्रममा मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेका हुन् । हालसम्म उपचारका लागि कुनै सहयोग नपाएका अधिकारीलाई उनका परिवारले सम्पत्ति बेचेर नेपाल र भारतका विभिन्न अस्पतालमा उपचार गराएको भएता पनि ती सबै प्रयासहरु निरर्थक सावित भएका छन् । हाल अधिकारी परिवार उनको उपचारका लागि अमेरिका लैजाने वातावरण र सहयोग जुटाइदिन नेपाल सरकारको सहयोगको प्रतीक्षामा रहेको छ ।
नेपालका वरिष्ठ भनाउँदा राजनीतिज्ञहरु तथा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु सामान्य रोग लागे पनि युरोप र अमेरिकामा सरकारी कोषबाट उपचार गराएका दर्जनौँ उदाहरणहरु स्वास्थ्य मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा भेट्न सकिन्छ । तर, एक जना प्रतिभासम्पन्न दक्ष चिकित्सक भने राम्रो उपचार नपाएर जीवन र मृत्युको दोसाँधमा छन् । उनको जीवनरक्षाका लागि भगवान्को मात्र भर नपरेर नेपाल सरकारले आवश्यक उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने चितवनवासीको माग हो । अरुको जीवन बचाउने पेसामा लागेका डाक्टर आफैँले भनेजस्तो उपचार नपाएर मृत्युवरण गर्नुप¥यो भने त्योभन्दा दुःखदायी विषय अरु केही पनि हुन सक्दैन ।
सम्भवतः उनको चिन्ताजनक स्वास्थ्य स्थितिसम्बन्धमा चितवन पोष्ट दैनिकले पहिलोपटक हिजो चैत १४ गतेको अंकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो । एक जना दक्ष चिकित्सकलाई उपचार गराएर सरकारले आफ्नो मानवीय कर्तव्य पूरा गर्नुपर्दछ । राष्ट्रिय ढुकुटीको ठूलो धनराशि व्यर्थ र अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको पृष्ठभूमिमा डा. अधिकारीलाई बचाउन सरकारका लागि कुनै समस्याको विषय हुन सक्तैन । कर्तव्य पालनकै सिलसिलामा दुर्घटनामा परेका डा. अधिकारी राष्ट्रकै सम्पत्ति भएकाले चितवनका सभासद्हरुले यो गम्भीर विषयका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनु अब अत्यन्त जरूरी भैसकेको छ ।
खासगरी भन्नुपर्दा उनको उपचारसम्बन्धमा नेपाल चिकित्सक संघले पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु पर्ने हो । तर, अहिलेसम्म त्यस्तो सार्थक प्रयास भने हुन सकेको पाइएको छैन । आफ्नो सहकर्मी तीन वर्षदेखि जीवन र मृत्युको दोसाँधमा उभिँदा पनि संघले आवश्यक प्रयास गरेर उनलाई बचाउन पहल नगर्नु आफैँमा दुःखको विषय हो । भ्रष्ट राजनीतिज्ञभन्दा दक्ष प्राविधिक जनशक्ति मुलुकका लागि ठूलो आवश्यकता हो । उनलाई बचाउन चितवनवासी जनता र चितवनमा कार्यरत चिकित्सकहरुले पनि चन्दा संकलन अभियान सञ्चालन गरेर भए पनि ३६ वर्षीय डा. प्रकाश अधिकारीलाई बचाउनेतर्फ हामी सबै र सरोकारवाला निकायहरुको ध्यान जानु जरूरी देखिएको छ ।